९८ बर्षिय नन्दमायाले ४३ रोपनी जग्गा दिइन् तर गाउँलेले १४ रोपनी मात्र लिए - Ektm news
२०७२ साल को भुकम्प पछि नया जिबन पायको बालक अहिले स्कुल जादै
मौसमका बारेमा आयो यस्तो भविष्यवाणी
यो वर्षको मनसुन नेपालका लागि यसकारण रहनेछ फलदायी
देशैभरि सार्वजनिक यातायात बन्द, यात्रुको बिजोग
भर्खरै आयो दुखद खबर भोली नेपाल बन्द
अस्पतालमा सुत्केरी हुन आएकी राधिकाको मृत्यु, आफन्तद्धारा अस्पतालमा तोडफोड
भर्खरै वीरगन्ज मेनरोडमा बम विस्फोट
मौसमबिदले दिए यस्तो जानकारी,अझै एक-दुई दिन पानि पर्ने !
भारतीय एसएसबीको टिमले फेरी भत्कायो नेपालको सिमानाको तारबार,नेपाल प्रहरी माथीनै दुर्व्यवहार
गर्भवती बनाएर नेपाल आएका प्रकाशलार्इ खाेज्दै मलेसियाबाट अाइन् मलेसियन प्रेमिका
राजा बिरेन्द्रको गोप्य कुरा बाहिरियो यस्तो थियो संसारले नै थाहा नपाएको पढ्दा पनि आँसु आउने घटनाहरु
४८ आप्रवासीकोे डुङ्गा डुब्दा मृत्यु
सालीलाई जबर्जस्ती गरेको आरोपमा दुर्गाबहादुर क्षेत्री प्रहरी फन्दामा।
रेल चलाउने स्वीकृति चीनले दियो
Home›समाज›९८ बर्षिय नन्दमायाले ४३ रोपनी जग्गा दिइन् तर गाउँलेले १४ रोपनी मात्र लिए
९८ बर्षिय नन्दमायाले ४३ रोपनी जग्गा दिइन् तर गाउँलेले १४ रोपनी मात्र लिए
नन्दमाया गुरुङको उमेर भयो ९८ वर्ष । स्वभाव कस्तो अनौठो छ भने जे बोल्यो पुराइहाल्नुपर्ने । बोलेपछि बोल्यो बोल्यो । तर, जथाभावी बोल्दिनन् । विचार पुराएर बोल्छिन् । किनभने दुःखसुख र अनुभवले खारिएकी छिन् । त्यसै बितेको छैन ९८ वर्ष ।
ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका ९ हाङ्देवामा घर छ । घरबाट अलि पर बारी छ । बारी सम्म र फराकिलो छ । बारी बाँझो भएको बेला युवा तथा बालबालिकाहरु फूटबल खेल्थे । गाउँमा जनसंख्या बढ्दै गयो, युवा र बालबालिकाको संख्या बढ्दै गयो । खेल्ने ठाउँ भएन । सबैको खेल्ने ठाउँ बन्यो नन्दमायाको बारी । त्यसपछि फूटबल खेलिदिएका कारण खेति लगाउन पनि सकिनन् ।
यहाँ नन्दमायाको वर्णन गर्दा एउटा प्रश्न राखौं । प्रश्न हो– खेति गर्ने आफ्नो बारीलाई गाउँका युवाहरुले खेल मैदान बनाएको को हेरेर बसिरहन्छ ? कसले मान्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ सामान्यता ‘मान्दैन’ भन्ने आउँछ । तर, नन्दमाया भने युवाहरुले बारीलाई खेल मैदान बनाउँदा खुसी थिइन् । बारीमा युवा तथा वालवालिकाहरु फुटबल खेल्थे, अनेक खेल खेल्थे । अरु भए लाठो लिएर लखेट्न जान्थे । तर, नन्दमाया भने सकिनसकी हिँडेर खेलमैदान बनेको बारीमा पुग्थिन् र युवाहरुको खेल हेर्थिन् । हौसला दिन्थिन् ।
‘असाध्यै आनन्द आउँछ मेरा नाति पनाति उमेरका यी केटाहरुले खेलेको देख्दा’, नन्दमाया भन्छिन् ।
युवाहरु खेल्थे, नन्दमाया हेरेर बस्थिन् । नन्दमायालाई युवाहरु असाध्यै माया गर्ने, नन्दमाया पनि युवाहरुलाई माया गर्ने । खेति गर्ने आफ्नो बारी खेल मैदान बनाउन दिएकोमा अनुगृहित थिए युवाहरु ।
९८ वर्षिया वृद्ध । जीवनको के भर ? एकदिन खेलिरहेको बेला नन्दमाया मैदानमा पुगिन् । युवाहरुले भने, ‘बोजू, तपाईं भएकोले हामी यसरी खेल्न पाएका छौं, तपाईं नरहनुभएपछि खेल्न पाउँदैनौं ।’
सामान्य रुपमा भनेका थिए युवाहरुले । नन्दमायाको ह्रदयमा ठक्कर दियो यो वाक्यले । ‘केटाहरुले मलाई त्यसो भने, मलाई त साह्रै चिन्ता लाग्यो । केटाहरुको माया लाग्यो,’ नन्दमाया भन्छिन् ।
त्यसपछि नन्दमायाले एउटा आश्यर्चजनक निर्णय गरिन् । उनको निर्णयले परिवार स्तब्ध भयो, समाज चकित भयो । विश्वाश नै गर्न नसकिने निर्णय !
नन्दमायाले भनिन्– ‘म फ्याट्टै मरें भने यी गाउँका केटाहरुले खेल्न पाउँदैनन् । त्यसैले खेल मैदान बनाउन मेरो सबै जग्गा दिन्छु ।’
अविश्वशनीय थियो नन्दमायाको घोषणा । सुरुमा त गाउँका युवाहरुले विश्वाश नै गर्न सकेनन् । नन्दमाया भन्न थालिन्, ‘चाँडो जग्गा पास गरेर लैजाओ ।’
अलिअलि होइन, ३९ रोपनी जग्गा ।
अनि, नन्दमायाले नदिने भन्ने कुरै थिएन । नन्दमायाले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो, बोलेपछि गरेर छाड्छिन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।
नन्दमायाले जग्गा दिने भइन् तर लिने कसरी ? समस्या भयो । व्यक्तिको नाममा जग्गा लिएर नहुने । कुनै संस्था चाहियो । त्यसपछि एउटा क्लब दर्ता गठन गर्ने निर्णय स्थानीयले गरे । क्लबको नाम के राख्ने ? अहँ, नाम खोज्न कुनै समस्या भएन । नाम साक्षात अगाडि थियो । नाम हो– नन्दमाया स्पोर्टिङ क्लव । स्थानीयको भेलाले ताली बजाएर शानदार ढंगले यो नाम पारित गरे ।
क्लबको नाम नन्दमाया भन्दा बाहेक अरु केही हुनै सक्दैनथ्यो । क्लब दर्ता भयो ।
३९ रोपनी जग्गा केके गर्ने ? गाउँमा छलफल हुन थाल्यो । छलफलले अर्काे अनौठो निर्णय गर्यो । पूरै ३९ रोपनी जग्गा नलिने । खेल मैदान बनाउन १४ रोपनी पर्याप्त हुन्छ, त्यति मात्र लिने ।
जग्गा दान दिने निर्णय गरेर नन्दमायाले महानता प्रदर्शन गरिन्, चाहिए जति मात्र जग्गा लिने निर्णय गरेर स्थानीयले अर्काे महानता देखाए ।
साविकको हाङ्देवा गाविस २ सैसेले निवासी नन्दमायाले क्लवका नाममा रजिष्टे«शन पास गरिदिइन् । पास गर्न औठाछाप लगाउँदा प्रफुल्ल देखिन्थिन् नन्दमाया ।
नन्दमाया क्लवका सचिव समेत रहेका घनेन्द्र गुरुङका अनुसार सो जग्गामा नगरपालिकाले व्यवस्थित खेल मैदान बनाइदिने भएको छ ।
तीन छोरा र चार छोरीकी आमा हुन् नन्दमाया । जेठा छोराको गत वर्ष देहान्त भयो, उनी जेठी बुहारी देवी गुरुङस“ग बस्छिन् । माइला छोरा घर नजिकै बस्छन्, कान्छो तराइमा छन् । छोरीहरु आ–आफ्नो घरमा छन ।
नन्दमायालाई फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल, उप–प्रमुख तारा भट्टराई, वडाध्यक्ष तारा बराल लगायतले घरमै गएर अभिनन्दन गरेका छन । मेयर प्याकुरेल भन्छन्, ‘हजुरआमाको काम एकदमै सह्रानीय छ ।’
नन्दमायाले दिएको जग्गाको न्यूनतम ४२ लाख रुपैयाँ पर्ने आकलन गरिएको छ ।
नन्दमाया भन्छिन्, ‘यो ठाउँमा राम्रा र ठूला खेल भएको देख्न मन छ ।’
ब्राह्मण चेलीले चुनौती बंगुरका पाठा स्याहारेर करोडपति ...
एक पटक हेर्नुहोस्… हाँसेरै मर्नुहुन्छ (रमाइलो भिडियो)
मुक्तिनाथ हिँडेका तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना, सात घाइते
बाघ सङ्ग जुध्ने रामेछाप सेलेघाटका कटक ब माझी ! बाघको मुखमा हात हालेर बाघको भुँडी यसरी निकाले!सत्य घटना!
यार्सागुम्बा संकलन गरे एक लाख जरिवाना, संकलन गरेको यार्सागुम्बा पनि जफत गरिने
झोलुंगे पुलबाट खसेर एकको मृत्यु ! – मृत आत्माले शान्ति पाओस
हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने तीन भारतीय प्रहरीलाई यसरी ठिक पारे
दुखद खबर : चितवनमा सवारी दुर्घटनामा परी ९७ जनाको मृत्यु
गर्मी मौसममा सौन्दर्यका लागि काँक्रो !
छोराको रहर अधुरै रह्यो, फेरि छोरीकै बुवा बने ७७ बर्षीय बृद्ध, पिडित दम्पत्तिलाई ९ हजार ३८३ युरो सहयोग
यी हुन् खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना
कहालीलाग्दो बांग्ला जहाज दुर्घटना कि pilot,हेर्नुहोस दुर्घटना स्थल कस्तो थियो मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना
कहालीलाग्दो बांग्ला जहाज दुर्घटना कि pilot,हेर्नुहोस दुर्घटना स्थल कस्तो थियो मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना युएस बगंला एयरलाइन्सको बिमान दुर्घटना भएपछी दुर्घटनाको कारण के थियो ? र यसको जिम्वेवार को ...
मुत्तिनाथमा मोदि पुगेपछि यस्तो देखियो !! यस्तो भयो मन्दिरमा
विश्वमै नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट सोफिया काठमाडौँमा, नेपालको बारेमा यसो भन्छिन् उनि (भिडियो सहित)
यो भिडीयो हेरेर तपाईं चकित पर्नु हुनेछ बिश्वास गर्नै गर्हो – हेर्नुस भिडीयो !
जब ईसाई फादरीहरु चढेका ब्रिटिश एअरवेजका विमानलाई पंक्षीहरूले आक्रमण गरेपछि (फोटो फिचर)
eKTM News नेपाली भाषाको अनलाईन समाचार साइट हो। यहाँ बाट तपाई ले ताजा ताजा समाचार, मनोरन्जनात्मक कुरा हरु, स्वास्थ्य जानकारीहरु र अन्य जानकारीमुलक कुराहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ ।